Alamaayyoo Haayilee : ''Gadaan Meelbaa gadaa qabbanaati, gadaa horataati'' - BBC News Afaan Oromoo
Qorataa seenaa Obbo Alamaayyoo Hayilee
Torban muraasa dura miseensi Gadaa Birmajii Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo baallii isaanii miseensa Gadaa Meelbaa Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaaf dabarsaniiru.
Obbo Alamaayyoo- Nuyi asiitti miseensa jenna. Gara Kibbaatti Booranni gogeessa jedha. Boorana keessatti maqbaasaa torbatu jira. Garuu baalliin isaa shanuma. Asiitti maqaanis shan miseensis shanuma. Miseensonni Gadaa shaman kuni Birmajii, Meelba (Beelbaa), Halchiisa (Michillee), Duuloo fi Roobaleedha. Akka paartii shaniitti fudhachuu dandeenya. Yeroo isaan biyya itti bulchan waggaa saddeet saddeetin qoodama.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sambatoo baallii dabarsan
Obbo Alamaayyoo- hunduu miseensa isaa jaalata, ni leellisu. Fakkeenyaaf amma Birmajiin yoo leellisan 'Birmajii lolaa' jedhu ni miidhakfatu. Roobaleenis 'Roobalee michuu roobaa, Gadaa roobni hin dhabamne, kan misoomni itti hin dhabamne' jedhanii gadaasaanii jajatu. Duuloonis 'duulli hin dhabamu. Duulani injifatu, hammeenya cabsiti' jedhu. Michilleedhaanis 'michuu lolaa' jedhuuni. Beelbaanis akkasuma ' kan beela bahan, kan qotee quufa fidu kan beela oolchu , Gadaa gabbattuu, quuftuu' jedhuuni.
Abbaa Gadaa Goobanaa Hoolaa
Viidiyoo, Sirna baalli dabarsuu abbootii gadaa